Ergadii kaqeybgashay shirka Afka Soomaaliga oo maanta soo booqday wasaaradda warfaafinta “Sawirro” – Radio Muqdisho
Ergadii kaqeybgalay shirkii looga hadlayay horumarinta afka Soomaaliga ayaa maanta kormeer ku yimid xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Muqdisho iyagoo halkaas kulan kula yeeshay wasiirka wasaaradda warfaafinta,hidaha iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo howl_wadeenada wasaardda.
kulankan ayaa looga hdlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda uu hadda afkeenu ku suganyahay iyo horumarintiisa iyadoo lagu ballamay in wasaaradda oo kaa shaneysa warbaahinta Qaranka ay qeyb weyn ka qaadato si uusan u dabar go,in.
Gudigan oo ka kooban khubaro afka Soomaaliga iyo wariye_yaal muddo dheer kasoo shaqeynayay Radiomuqdisho intii ay jirtay dowladii kacaanka ayaa sidoo kale booqday qeybaha ay warbaahinta qaranku ka koobantahay gaar ahaan Tvga Qaranka,Radiomuqdisho iyo xarunta keydinta hadalka ooo taariikh badan oo Soomaaliya ay leedahay ku keydsantahay.
Intaa kadib ayaa gudigan waxa ay ka qeybgaleen Barnaamij gaar ah oo ku saabsan taariikhda afkeena hooyo iyo marxaladihii uu soo maray intii aan la qorin kahor iyo markii la qoray kadiba kaasoo ka baxaya tvga Qaranka iyo Radiomuqdisho.
Wasiirka warfaafinta mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu gacan weyn ka geysan doono badbaadinta afkeena hooyo islamarkaana uu dadaal ku bixin doono sidii wacyigelin ku aadan arinkaasi joogto looga sii deyn lahaa warbaahinta Qaranka qeybaheeda kala duwan iyo tan gaarka loo leeyahay intaba.
Bashiir Diiriye Shariif oo isku sharaxay hogaanka maamulka gobollada dhexe"Sawirro"